Faah faahin:- Askari ka tirsan ciidanka dowladda oo goordhaw si bareer ah u dilay qof shacab ah – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Askari ka tirsan ciidanka dowladda oo goordhaw si bareer ah u dilay qof shacab ah
Mid ka mid ah darawalada ku shaqeysta mootooyinka Bajaajta ah oo ka howlgala magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ayaa la sheegaya in goordhaw lagu dilay xaafadda Buulo-xuubey ee degmada Wadajir.
Dilka ninkaasi darawalka ah ayaa la sheegayaa inuu geystay askari ka tirsan ciidanka militeriga dowladda federaalka Soomaaliya, kaas oo ku hubeysnaa qoriga AK-47, waxaana la sheegaya in marxuumka la dilay uu askarigaasi ka diiday inuu hore usii qaado.
Dad goob-joogayaal oo la hadlay warbaahinta Bulshoweyn ayaa sheegay in askarigii dilka geystay uu ka mid ahaa ciidanka militeriga Soomaaliya, islamarkaana uu goobta isaga baxsaday kadib markii uu dilka geystay.
Marxuumka la dilay ayaa la sheegayaa in lagu magacaabi jiray Cabdi Dhiblaawe, wuxuuna ka mid ahaa dadka sida weyn looga yaqaanay deegaankaas.
Inta badan ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ka geysta dilal bareer ah oo ay kula kacaan dhalinyarada xoogsatada ah oo ku xamaasha mootooyinka Bajaajta ah.
Dilkaan ayaa kusoo beegmaya xilli dhawaantaan askari ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya uu suuqa weyn ee degmada Wadajir ku dilay labo qof oo ka mid ahaa ganacsatada degmadaasi.
Ilaa iyo haatan ma jirto cid ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya oo wax ka qabata dilka soo noq-noqday oo inta badan ka dhaca magaalada Muqdisho.